के तपाई पटक-पटक फूड प्वाइजनिंगका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ? यी ५ घरेलू उपाय जसको सहायताले सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ – Etajakhabar
के तपाई पटक-पटक फूड प्वाइजनिंगका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ? यी ५ घरेलू उपाय जसको सहायताले सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ
ताजा खबर:- खानपानको माध्यमले शरीरमा जब ब्याक्टेरिया आदि प्रवेश गर्छ तब यस्तो अवस्थामा फूड प्वाइजनिंगको समस्या उत्पन्न हुन्छ । प्रायजसो यो समस्या रोगप्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा हुन्छ । यसबाट बँच्नको लागि आफ्नो खानपान तथा यससँग सम्बन्धित चीजमा निकै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । यसको लागि भोजनलाई खुल्ला राख्नुहुँदैन । फोहोर पानीको भोजन बनाउने क्रममा प्रयोग गर्नु हुँदैन । यदि कुनै पनि कारणले फूड प्वाइजनिंग भएको छ भने यी प्राकृतिक उपचारको सहायताले यसको उपचार गर्न सकिन्छ ।
अदुवा- पाचन तन्त्रको हरेक समस्याको लागि अदुवाको सेवन उपयोगी हुन्छ । फूड प्वाइजनिंगबाट छुटकारा पाउनका लागि अदुवाको चिया निकै लाभकारी हुन्छ । यसलाई बनाउनको लागि अदुवाको चूर्ण या काँचो अदुवालाई पिसेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । अदुवाले आन्द्रामा ती ब्याक्टेरियालाई उत्पन्न हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ, जो फूड प्वाजनिंगको लागि जिम्मेवार हुन्छ ।
जीरा- जीरा खानालाई सुगन्धित र स्वादिष्ट बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ । हरेक दिन एक चम्मच जीरालाई पिसेर खानामा सेवन गर्दा फूड प्वाइजनिंगबाट छुटकारा मिल्छ । यसको साथै यो आन्द्रामा हुने सूजनलाई पनि निको पार्न मद्दतगार हुन्छ ।
केरा- डायरिया र कब्जियतको उपचारमा केराको प्रयोग निकै लाभकारी हुन्छ । यो पाचनमा सहज हुन्छ र मलद्वारमा चिल्लोपन ल्याउन मद्दत गर्छ । फूड प्वाइजनिंगमा केराको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ । केराको सेवन गर्ने क्रममा यस कुरामा पनि विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ कि दुई भन्दा बढी केरा खाँदा डायरिया बढ्न पनि सक्छ ।
पानी- फूड प्वाइजनिंग हुँदा प्रयाप्त मात्रामा पानी पिउनु बढी फाइदाजनक हुन्छ । यो केवल शरीरमा विषाक्त तत्वलाई कम गर्ने मात्र नभई शरीरमा यसबाट पर्ने दुष्प्रभावबाट पनि बचाउने काम गर्छ ।
स्याउ- स्याउको सेवनले फूड प्वाइजनिंगमा निकै आराम पुर्याउँछ । स्याउको सेवनले छाती पोल्ने समस्यालाई कम गर्छ तथा ती ब्याक्टेरिया फैलिनबाट रोक्छ, जो फूड प्वाइजनिंगको कारक हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०३, २०७४ समय: ०:०५:२७